I-Pin entsha ye-Granulator edibeneyo ye-Drum Pin Granulating Machine
Isichumisi sesichumiso sendalo sisebenzisa isantya esiphezulu sokujikeleza amandla oxhokonxayo kunye nokubangela amandla e-aerodynamic ukuqhubeka ngokuqonda inkqubo yokuxuba, i-granulating, ipolishi, kunye nokwenza umgubo ocolekileyo ukufezekisa injongo yegranulation. Ubume be-particle bubunqamle, ubukhulu buyi -0.7, ubukhulu be-particle ubukhulu buphakathi kwe-0.3-5 mm, kwaye izinga le-granulation ngu -93%. Ubungakanani be-particle diameter bunokulungiswa ngokufanelekileyo sisixa sokuxuba kwezinto kunye nesantya sokuluka. Ngokubanzi, isezantsi isixa sokuxuba, isantya sokujikeleza Okukhona kuphakama ubungakanani bamasuntswana, amancinci amancinci, kunye nokuphinda-phindeneyo. Lo matshini ulungele ngokukodwa i-granulation yokukhanya kunye nezinto zomgubo ocolekileyo. Ukucocwa kwamasuntswana esiseko somgubo ocolekileyo, kokukhona ukuphakama kwamasuntswana, kwaye ngcono umgangatho weepellets Izinto eziqhelekileyo zokufaka isicelo zibandakanya amalahle engca, udaka, iinkomo, iigusha, inkuku kunye nokuvumba komgquba wehagu, ukubila kwendiza, intsalela yamayeza, intsalela esetyenziselwa ukukhulisa amakhowa oyster, kunye nokuvundiswa kwenkunkuma yasekhaya.
I-Pin entsha ye-Granulator ngumatshini we-granulating okhawulezayo, unesantya sokubaleka ngokukhawuleza ngexesha lenkqubo ye-granulating. Ineentlobo ezahlukeneyo, njengohlobo lokunciphisa, ngaphandle kohlobo lokunciphisa, igubu lephini, kunye nokunye, amandla avela kwi-1t / h ukuya kwi-20t / h enkulu, yinkqubo emanzi emanzi, inokuqhubekeka ngokuthe ngqo kumgquba ube ziigranuwe kwaye ufuna ukuqhubeka inkqubo yokomisa.
Usebenzisa isantya esiphezulu sokujikeleza amandla oxhokonxayo kunye nefuthe lamandla omoya, izinto zomgubo ocolekileyo zinokuqhubeka ngokuxubeka kumatshini, zenziwe ngegreyidi, zenziwe zangumgubo, kwaye zixinekile, ukuze kufezekiswe injongo yegranulation. Ubume be-particle bubunqamle, ubukhulu buyi -0.7, ubukhulu be-particle ubukhulu buphakathi kwe-0.3-3 mm, kwaye izinga le-granulation ngu -80%. Ubungakanani be-particle diameter bunokulungiswa ngokufanelekileyo sisixa sokuxuba kwezinto kunye nesantya sokuluka. Ngokubanzi, isezantsi isixa sokuxuba, isantya sokujikeleza Okukhona kuphakama ubungakanani bamasuntswana, amancinci amancinci, kunye nokuphinda-phindeneyo.
1.Ukusasazwa kobungakanani bamasuntswana kunye nokulawula lula: Xa kuthelekiswa nezixhobo ze-granulization ze-granulation (ezifana ne-rotary disc granulator, igubu le-drum), ulwabiwo lobungakanani be-particle lugxile.
2. Umxholo ophezulu we-organic: amasuntswana avelisiweyo angqukuva. Umxholo wezinto eziphilayo unokuphakama njenge-100%, uqaphela i-organic granulation.
3. Ukusebenza okuphezulu: ukusebenza kakuhle okukhulu, kulula ukuhlangabezana neemfuno zemveliso enkulu.
4. Imiphetho yegranulation kunye neekona, iqondo lomgubo ophantsi: Amasuntswana angqukuva aneeengile ezibukhali emva kokuba egalelwe ityhubhu, ngoko ke inqanaba lomgubo liphantsi.
Chwetheza Y800 Y1000 Y1200 Y1560
Ukondla ukufuma 35% -45% 35% -45% 35% -45% 35% -45%
Ubungakanani beepellet zokugqibela Ububanzi 1-5mm, imilo ngeenxa zonke
amandla 37w 45kw 75kw 18.5kw
Ubukhulu 4.25X1.85X1.3M 4.7X2.35X1.6m I-4.9X2.55X1.8m X1.5x6m
Umthamo 1-2t / h 3-4t / h 5-7t / h I-10-12t / h
UKUHANJISWA KWEENKONZO KUNYE NOKUHAMBELA UMthengi